ဆီးချိုရောဂါရှိသူတစ်ယောက် ဘယ်အချိန်မှာ လေဖြတ်နိုင်သလဲ… – Healthy Life Journal
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—
Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူက ဘယ်အချိန်မှာ လေဖြတ်နိုင်ပါသလဲ ဆရာ။
A. ဆီးချိုရောဂါက သွေးတိုးရောဂါနဲ့တွဲနေရင်၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ အဆီများတာနဲ့တွဲနေရင်၊ လေဖြတ်တာနဲ့ နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ လေဖြတ်တာ၊ အဆီများတာနဲ့ သွေးကြောပိတ်တာတွေက တစ်တွဲတည်းပါပဲ။ ဒီအထဲက ရောဂါတစ်ခု- နှစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကျန်တဲ့ရောဂါတွေလည်း ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုသမား သွေးတိုးရှိနေရင်၊ အဆီများနေရင်၊ သွေးကြောပိတ်သလားဆိုတာတွေ စစ်ပေးရပါတယ်။ ထိုနည်းတူ တခြားသွေးတိုးနေသူဆိုရင်လည်း ဆီးချိုရှိသလား၊ အဆီများနေလား၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်နေလားဆိုတာတွေ ပြန်စစ်ပေးရပါတယ်။ ဒီငါးခုက အမြဲတမ်းတွဲနေပါတယ်။ လေဖြတ်တာက အဓိကကတော့ သွေးတိုးရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆီးချိုရောဂါ၊ နောက်တစ်ခုက အဆီများတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုသမား သွေးတိုးရှိနေပြီး သွေးတိုးကို မထိန်းနိုင်ရင်၊ အဆီများနေပြီး အဆီကိုမလျှော့ချနိုင်ဘူးဆိုရင် လေဖြတ်တတ်ပါတယ်။
ဆီးချိုသမား လေဖြတ်တာက တခြားလူတွေ လေဖြတ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ သီးသန့်လက္ခဏာ မပြပါဘူး။ လေဖြတ်တာက ရုတ်တရတ်ကြီး ဖြတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရုတ်တရတ် အကောင်းကြီးကနေ မူးတယ်၊ မူးတယ်ဆိုပြီး လဲကျသွားတယ်။ ပြီးရင် ပါးရွဲ့သွားတာမျိုး၊ ကိုယ်တစ်ခြမ်း၊ လက်တစ်ခြမ်းက လေးတယ်သော်လည်းကောင်း၊ လှုပ်မရတော့ဘူးသော်လည်းကောင်း ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ စကားမပီတော့တာ၊ သတိလစ်သွားတာတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မေဂျာအဆင့်ဆို သတိလစ်သွားတတ်ပါတယ်။ မိုင်နာဆိုရင် သတိမလစ်ပါဘူး။ မနက်ကို အကောင်းကြီး၊ ညနေကို လေဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လေဖြတ်သွားတာကလည်း နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သွေးကြောပိတ်သွားရင်လည်း လေဖြတ်တတ်ပါတယ်။ သွေးကြောပေါက်သွားရင်လည်း လေဖြတ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါကြောင့် လေဖြတ်တာဆိုရင် နှလုံးသွေးကြောပိတ်တတ်ပါတယ်။ သွေးတိုးကြောင့် လေဖြတ်တာဆိုရင် သွေးကြောပေါက်တာ ပိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ သွေးတိုးရောဂါ တွဲနေတဲ့အချိန်မှာ လေဖြတ်တယ်ဆိုရင် သွေးကြောပိတ်သွားတာဆိုရင် ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ဆီးချိုမနိုင်လို့ လေဖြတ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကြောပေါက်သွားတာဆိုရင်တော့ သွေးတိုးကို ကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်လို့ လေဖြတ်သွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုက သွေးကြောတွေကိုထိတယ်။ သွေးကြောအကြီးကိုလည်း ကျဉ်းစေသလို အသေးကိုလည်း ပိုကျဉ်းလာစေပါတယ်။ ဆီးချိုသမားတွေက အဆီတွေပိုများနေတတ်ပါတယ်။ သွေးကြောထဲမှာ အဆီတွေစုပုံဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်။ ဆီးချိုသမားကိုယ်တိုင်က သွေးကိုပိုခဲစေတတ်ပါတယ်။ သွေးကြောကလည်းကျဉ်းမယ်၊ အဆီတွေလည်း ပိုများလာမယ်၊ သွေးတွေကလည်း ပိုပြစ်လာတဲ့အတွက် သွေးကြောပိတ်သွားပြီး လေဖြတ်ဖို့အခွင့်အလမ်း အရမ်းများပါတယ်။
“ဆီးချိုသမားလေဖြတ်တာက တခြားလူတွေ လေဖြတ်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ သီးသန့်လက္ခဏာ မပြပါဘူး။ လေဖြတ်တာက ရုတ်တရတ်ကြီးဖြတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရုတ်တရတ် အကောင်းကြီးကနေ မူးတယ်၊ မူးတယ်ဆိုပြီး လဲကျသွားတယ်။ ပြီးရင် ပါးရွဲ့သွားတာမျိုး၊ ကိုယ်တစ်ခြမ်း၊ လက်တစ်ခြမ်းက လေးတယ်သော်လည်းကောင်း၊ လှုပ်မရတော့ဘူးသော်လည်းကောင်း ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။”
လေဖြတ်ဖို့ကို များသောအားဖြင့် သတိပေးလက္ခဏာမရှိပါဘူး။ တချို ့မှာတော့ လေဖြန်းတယ်ဆိုပြီး လက္ခဏာပြတတ်ပါတယ်။ လေဖြန်းတာက လေမဖြတ်ခင်ဆက်ကြားမှာ ရုတ်တရက်ကြီး စကားပြောမပီဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်းပဲ ပြန်ကောင်းသွားတယ်။ ရုတ်တရတ်ကြီး လက်တစ်ခြမ်းလှုပ်မရတော့ဘူး၊ ချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားတယ်။ ရုတ်တရက်ကြီး မျက်လုံးက မမြင်ရတော့ဘူး မှောင်သွားတယ်၊ ချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုရင် လေဖြန်းတာ (TIA) လို့ခေါ်ပါတယ်။ လေဖြန်းတာက လေဖြတ်ဖို့အကြိုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဆီးချိုရှိတဲ့သူ လေဖြတ်ပြီဆိုရင် လူနာရှင်အနေနဲ့ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းကို အမြန်ဆုံးပြပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုပါတယ်။ သိပ်ဆိုးရင်တော့ ဆေးရုံတက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဆေးရုံရောက်ရင် ဆီးချိုကိုထိန်းပေးရပါတယ်။ သွေးတိုးနဲ့ အဆီများနေရင်လည်း ထိန်းပေးရပါတယ်။ ဆီးချိုသမားလေဖြတ်ရင် အသက်အန္တရာယ်လည်း စိုးရိမ်ရပါတယ်။ လေဖြတ်တာကိုလည်း ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။ ဆီးချိုသမားတွေရဲ့အဓိကအချက်သုံးချက်ဖြစ်တဲ့ ဆီးချိုကိုနိုင်အောင်ထိန်းပါ၊ သွေးတိုးကိုထိန်းပါ၊ အဆီကိုထိန်းပါ. . ဒါဆို လေဖြတ်ဖို့ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုသမားလေဖြတ်ရင် ဆီးချိုကိုထိန်းမယ်၊ သွေးတိုးနဲ့အဆီများတာကိုပါ ထိန်းပေးရတာက တစ်ပိုင်းပါ။ တဆက်တည်းမှာပဲ လေဖြတ်တာကို ကုသမှုက တစ်ပိုင်းပါ။ အသက်အန္တရာယ်ရှိသလို ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးရပါတယ်။ လက်တွေ၊ ခြေထောက်တွေကို လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မဖြစ်အောင်လည်း တားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ဆီးချိုသမားတစ်ယောက်က ဆီးချိုရောဂါမရှိသူတွေထက် လေဖြတ်နိုင်ခြေက ၂ ဆကနေ ၄ ဆအထိ ပိုများပါတယ်။
Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူ လေမဖြတ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရပါသလဲ ဆရာ။
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ လေမဖြတ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ကတော့ ဆီးချိုကိုနိုင်အောင်ထိန်းပါ၊ သွေးတိုးရောဂါပါတွဲရှိရင် သွေးတိုးကိုနိုင်အောင်ထိန်းပါ။ အဝမလွန်ပါစေနဲ့။ အဆီနည်းအောင်နေပါ။ နောက်တစ်ခုက အက်စပရင်ကို အစာအိမ်ရောဂါမရှိရင် ပုံမှန်သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ အစာအိမ်ရောဂါမရှိရင် အက်စပရင်က နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်၊ အလားတူ လေဖြတ်တာကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစာအိမ်ရောဂါတွေ ဖြစ်နေရင်တော့ မသောက်သင့်ပါဘူး။ ဆီးချိုသမားတစ်ယောက် လေဖြတ်ပြီးသွားရင် အက်စပရင်ကို တစ်သက်လုံးသောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အစာအိမ်ရောဂါရှိရင် Clopidogrel ဆေးကို သောက်ပေးရပါမယ်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူ လေမဖြတ်အောင် ကာကွယ်တဲ့အပိုင်းက နှစ်ခုရှိပါတယ်။
(၁) Primary Prevention ဆိုတာ ဆီးချိုသမားတစ်ယောက် လေမဖြတ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ (2) Secondary Prevention ဆိုတာ ဆီးချိုသမားတစ်ယောက် လေဖြတ်သွားပြီး နောက်တစ်ခေါက် ပြန်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဆီးချိုသမားတစ်ယောက် လေဖြတ်ပြီးရင် အက်စပရင်ကို တစ်သက်လုံးသောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အက်စပရင်ဆေးနဲ့ မတည့်တဲ့သူတွေနဲ့ အစာအိမ်ရောဂါရှိသူတွေကတော့ Clopidogrel တစ်နေ့တစ်လုံးကို တစ်သက်လုံးသောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဆီးချိုသမားတစ်ယောက် လေမဖြတ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် တစ်သက်လုံး သွေးပေါင်ရယ်၊ သွေးချိုရယ်၊ အဆီရယ်ကို အမြဲထိန်းထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဆီးချိုသမားက လေမဖြတ်သေးဘူး၊ Primary Prevention အနေနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မယ်ဆိုရင် ဆီးချိုရောဂါရှိပေမယ့် အက်စပရင် စသောက်သင့်ပါဘူး။ အသက် ၄၀ ကျော်ရင်၊ ပြီးတော့ ဆီးချိုသမားက တခြားသွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနဲ့ အဆီများတာတွေဖြစ်နေရင်တော့ အက်စပရင်ဆေးကို သောက်ရပါမယ်။
ဆီးချိုသက်တမ်းရင့်လာရင် လူနာအများစုက ဆီးချိုထိန်းတာ မကောင်းတတ်ကြတော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဆီးချိုသက်တမ်းရင့်လာတဲ့အခါမှာရော ဆီးချိုကိုထိန်းတာ မကောင်းတဲ့အခါမှာရော လေဖြတ်နိုင်ခြေများတတ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါနဲ့တွဲပြီး သွေးတိုးရောဂါ၊ အဆီများတာတွေ တွဲနေရင်တော့ လေဖြတ်နိုင်ခြေက ပိုပြီးများပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါမရှိဘဲနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ခဏတာ ဆီးချိုတက်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ လေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း စိတ်ဖိစီးပြီး ဆီးချိုမရှိဘဲနဲ့ ဆီးချိုတွေတက်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်။ လေဖြတ်ပြီး လေး-ငါး-ခြောက်ရက်လောက်မှာ ဆီးချိုပြန်ကျသွားတယ်ဆိုရင် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လေဖြတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို သွေးချိုဆီးချိုတိုင်းလိုက်လို့ ၂၀ဝ ကျော်နေရင် ကုကို ကုသမှုပေးရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သွေးတွင်းသကြားဓာတ်က ၂၀ဝ ကျော်နေရင် ကုကိုကုရပါတယ်။ လေဖြတ်တဲ့လူနာက အစကတည်းက ဆီးချိုရောဂါရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ အခုမှ စိတ်ဖိစီးလို့ ဆီးချိုတက်သွားတာဖြစ်ဖြစ် ကုဖို့လိုပါတယ်။ မကုရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိသလို ကိုယ်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Related Items:Diabetes, healthy, Stroke